FAQ amin'ny lozisialy infrared - Zhongshan Amor Electrical Appliance Co., Ltd.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Cooktops Infrared sy Induction
Mety ho gaga ianao hoe inona no mahasamihafa ny lozisialy infrared sy induction…. Efa elaela ireo safidy roa ireo dia mba hanalavirana ny fisavoritahana rehetra, andao jerena ary hiresaka momba ny lovia mafana infrared vs lovia mafana fampidirana ary ny fomba fiasan'ny fomba fahandroana roa. Hodinihintsika ny antony fifidianana sy fampiasana hafanana infrared dia safidy tsara kokoa sy tsy lafo. Ary horesahintsika ny tombotsoan'ny fandrahoan-tsakafo infrared. Te hahita ireo lafaoro infrared malaza indrindra amin'ny benchtop?
Inona no atao hoe Cooking Infrared?
Ny fandrahoana infrared dia fomba mahasoa handrahoana sakafo mahasalama sy hitazomana otrikaina.
Ny hafanana infrared dia
Faingana handrahoana sakafo ny ankamaroan'ny sakafo- 3 x haingana kokoa noho ny fomba nentim-paharazana
Tsy miteraka hafanana ary mitazona ny lakozia ho madio kokoa
Mahandro tsara ny sakafonao fa tsy teboka mafana na mangatsiaka
Mitazona votoatin'ny hamandoana avo kokoa amin'ny sakafo
Ny mpahandro dia mora entina tokoa - Ny lakozia Benchtop, ny lafaoro toaster ary ny lakozia vita amin'ny seramika dia mety indrindra
lakozia, RV's, sambo, efitrano fandraisam-bahiny, toby fitobiana
Ny BBQ infrareda dia tsy dia tsara ampiasaina loatra ary mora kokoa ny mihazakazaka
Ahoana ny hafanan'ny Cooker infrared?
Ny koveta infrared dia vita amin'ny jiro fanamainana infrared amin'ny quartz amin'ny lovia metaly arovan'ny harafesina. Matetika ny jiro dia voahodidina coil mamiratra hamoaka na dia hafanana mamiratra aza. Ity hafanana mamirapiratra ity dia mamindra ny hafanana infrared mivantana amin'ny vilany. Ho hitanao fa ny mahomby infrared dia manana fahombiazana angovo avo kokoa noho ny coil elektrika matanjaka hatramin'ny fahombiazany avo telo heny. Ny tombotsoan'ny mpahandro infrared amin'ny vilany induction: azo ampiasaina ny karazana vilany sy lapoaly. Amin'ny lakozia fampidirana induction dia mila fitaovana mahandro manokana ianao.
Bill Best no namorona ny mpandrehitra infrared herinaratra voalohany tamin'ny voalohan'ny taona 1960. Bill dia mpanorina ny Thermal Engineering Corporation ary nanao patanty ilay mpandrehitra infrared azy. Nampiasaina voalohany tao amin'ny ozinina sy indostria toy ny orinasa mpamokatra kodiarana sy fatana lehibe ampiasaina hanamainana haingana ny loko fiara.
Tamin'ny taona 1980 dia noforonin'i Bill Best ny grill infrared ceramic. Rehefa nampidiriny tamin'ny forona barbecue noforoniny ny forongony vita amin'ny seramika dia hitany faingana kokoa ny sakafo masaka infrared ary mitazona ny haavon'ny hamandoana avo.
Ahoana ny fomba fiasan'ny grill infrared?
Ny hafanana infrared dia efa nisy foana. Ny lafaoro infrared dia mahazo ny anarany avy amin'ireo singa fanafana infrared lavitra izay eo am-pototry ny fivorian'izy ireo. Ireo hafanana ireo dia mamorona hafanana mamiratra izay mamindra amin'ny sakafo.
Ao amin'ny baomba mahazatra anao na ny arina entona, ny hafanana dia alohan'ny fandoroana ny saribao na ny gazy izay manafana ny sakafo amin'ny alàlan'ny rivotra. Miasa amin'ny fomba hafa ny grill infrared. Mampiasa singa elektrika na gazy izy ireo mba hanafanana ny toerana izay mamoaka onja infrared mivantana amin'ny sakafo izay eo ambony lovia, lovia na grill.
Inona no atao hoe fandrahoana sakafo?
Induction Cooking dia fomba fanavaozana sakafo vaovao. Ny lozisialy induction dia mampiasa electromagnets mifanohitra amin'ny fitarihana hafanana hanafanana ny vilany. Ireo lakozia ireo dia tsy mampiasa singa fanafanana handefasana hafanana fa hafanaina mivantana ilay sambo miaraka amin'ny sahan'hatra elektromagnetika eo ambanin'ny tampon'ny vera fandrahoana. Ny sehatry ny electromagnetic dia mamindra amin'izao fotoana izao any amin'ny vilia fandrahoana andriamby, ka mahatonga azy hanafana– izay mety ho vilany na lapoaly.
Ny tombony azo avy amin'izany dia ny mankany amin'ny maripana avo dia haingana amin'ny fifehezana ny hafanana eo noho eo. Ny koveta induction dia manana tombony betsaka ho an'ny mpanjifa. Ny iray amin'ireny dia tsy mahamay ny vata fandrahoana, mampihena ny mety ho may ao an-dakozia.
Ahoana no fiasan'ny fandrahoan-tsakafo induction?
Ny vata fandrindrana induction dia vita amin'ny tariby varahina apetraka ao ambanin'ny lovia fandrahoan-tsakafo ary avy eo dia alefa amin'ny alàlan'ny tariby ny fantson-tsolika miiba. Ny renirano mifandimby dia midika fotsiny hoe izay mamily lalana hatrany. Ity arus ity dia mamorona sahan'andriamby miovaova izay hamokatra hafanana ankolaka.
Azonao atao ny mametraka ny tananao eo ambonin'ilay vera ary tsy hahatsapa na inona na inona ianao. Aza asiana tànana iray izay vao natao nandrahoana tato ho ato fa ho mafana!
Ny fitaovana fandrahoan-tsakafo izay mety amin'ny mpahandro fampidirana dia vita amin'ny metaly ferromagnetika toy ny vy vy na vy tsy misy fangarony. Ny fanomezana anao mampiasa kapila ferromagnetika, varahina, vera, aliminioma ary vy tsy misy magnetika dia azo ampiasaina.
Maninona no tsara kokoa ny mahandro sakafo infrared? Infrared Hot Plate VS Induction
Matetika ny olona dia mametraka ny fanontaniana hoe "takelaka mafana infrared vs fampidirana" raha ny resaka herinaratra no resahina. Ny mpametaka infrared dia mampiasa herinaratra 1/3 eo ho eo noho ny karazana fahandroana hafa na grills. Ny mpandoro infrared hafanana haingana dia haingana, mamokatra hafanana ambonimbony kokoa noho ny grill na ny mahandro mahazatra anao. Ny sasany mahandro infrared dia mahatratra 980 degre Celsius ao anatin'ny 30 segondra ary afaka mamita ny nofonao ao anatin'ny roa minitra. Haingana be izany.
Mora kokoa ny manadio ireo mahandro infrared sy grill BBQ. Eritrereto ny korontana rehetra tamin'ny fotoana farany nampiasanao grill burner na arina arina…. Ny ratra rehetra izay nodiovina dia nodiovina…. Ireo singa mifono seramika ao anaty BBQ infrared fotsiny dia mila mamafa fotsiny ary miditra ao anaty vilia fanasana lovia ny lovia ao anaty vata fandrahoana.
Tombontsoa avy amin'ny fandrahoan-tsakafo tsy misy tohotra?
Ny fandrahoan-tsakafo tsy miangatra dia miantoka ny hafanana zaraina amin'ny lafin'ny fandrahoan-tsakafo. Ny hafanana mamirapiratra dia miditra an-tsakany sy an-davany ny sakafonao ary miantoka ny hamandoana hiakatra hatrany.
Mahandro haingana be ny mpametaka infrared. Manoro anao izahay hijerena akaiky ny sakafo ary hampihena ny hafanana rehefa ilaina izany. Tokony misafidy mpahandro infrared ianao miaraka amina toetr'andro isan-karazany.
Tsara ho an'ny tontolo iainana
Ny mpahandro sy ny grill infrared dia mampiasa solika 30 isan-jato eo ho eo noho ny herinaratra, gazy na saribao arinao. Mitahiry vola ianao ary manampy ny tontolo iainana indray. Jereo hoe inona avy ireo grill infrared 5 izay be mpitia indrindra eto
Mamonjy anao Fotoana
Satria manafana haingana indrindra ny grill infrared dia manatsara ny fandrahoana sakafo izy ireo. Afaka mitono barbecue ianao, hena natsatsika, mahandro sakafo ary manao izay tianao rehetra 3 heny haingana noho ny fahandro mahazatra.
Haingam-pandeha toy inona ny Cookers Infrared?
Ny mahandro infrared dia afaka mahatratra 800 degre Celsius ao anatin'ny 30 segondra. Haingam-pandeha toy izany izy ireo. Miankina amin'ny maodely sy ny karazany mazava ho azy, azonao atao ny mahazo maodely miadana kokoa. Mariho fa ny teboka iray manontolo amin'ny famindrana ny hafanana amin'ny infrared dia noho ny hafainganana.
Ny mpandoro entona sy ny mahandro arina dia mila hafanana halefa ao anaty vilia fandrahoan-tsakafo ary avy eo miandry ny hafanana mafana kokoa ny siny alohan'ny hampiakaran'ny hafanana. Apetaho amin'ny hafanana haingana ny vilany fandrahoana sakafo araka izay azo atao ary mbola arovy ny sakafonao amin'ny fahavoazana. Alao an-tsaina hoe mahandro barbecue ao anatin'ny 10 minitra fotsiny ianao ary ataovy matsiro toy ny taloha. Mety ho tianao koa ny hijery grill charbon
Mila fitaovana manokana ve ianao?
Tsy mila fitaovana mahandro manokana ianao araka ny efa noresahinay. Toy ny fahandro mahazatra dia afaka mahazo kojakoja am-polony izay mety ilainao fotsiny .. .. Toy ny lovia fitaratra matevina manokana ho an'ny mpahandro anao.
Famaranana ny inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Cooktops Infrared sy Induction
Ny fandrahoan-tsakafo infrared sy ny induction Cooking dia fomba fahandro mahandro tsara. Manolotra tombony bebe kokoa anefa ny Infrared satria masaka haingana kokoa ny sakafonao nefa tsy asiana lavenona na setroka ny sakafo. Ny mpahandro infrared dia tsara ho an'ny tontolo iainana ihany koa - manampy antsika hampiasa solika fôsily kely hamokarana hafanana.